Ny sidina ao Amsterdam ao anatin'ny seranana dia tonga soa aman-tsara any amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo any Moskoa
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tonga soa aman-tsara any amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo any Moskoa ny sidina ao Amsterdam ao anaty fahantrana
Tonga soa aman-tsara any amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo any Moskoa ny sidina ao Amsterdam ao anaty fahantrana
Febroary 6, 2021
Ny sidina Aeroflot avy any Moskoa mankany Amsterdam dia nanao antso nampitebiteby teo amin'ny 20 minitra taorian'ny niainganana
Milatsaka soa aman-tsara ny sidina ao Mosko-Amsterdam taorian'ny nandefasan'izy ireo antso vonjy
Ny seranam-piaramanidina rosiana Aeroflot dia nanamafy ny tatitra momba ny fikafika tokony hatao
Ny olana amin'ny rafi-pifandraisana amin'ny radio dia nahatonga ny fiverenan'ny sidina
Rosia AeroflotNy fiaramanidina mpandeha Airbus A320 manidina avy any Moskoa mankany Amsterdam dia nametraka antso fitaintainanana androany tokony ho 20 minitra taorian'ny nivoahany tamina haavo 8,000 metatra ambonin'ny Faritra Tver.
Voalaza fa ny sidina dia efa tonga any Moskoa Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo rehefa avy namoaka antso vonjy.
Ny seranam-piaramanidina rosiana Aeroflot dia nanamafy ny tatitra momba ny fikafika tokony hatao.
“Tonga any amin'ny seranam-piaramanidina fiaingana ny fiaramanidina. Ny antony mahatonga ny tsy fahombiazana [amin'ny rafi-pifandraisana amin'ny radio] dia hadihadiana ”, hoy ny tatitra.
“Nidina tany Sheremetyevo ilay Airbus 320 nanidina nankany Amsterdam taorian'ny nandoroany ny lasantsy. Nandeha araka ny fandaharam-potoana ny fipetrahana. Ny antony ao ambadiky ny fanapahan-kevitry ny mpanamory fiaramanidina hiverina any amin'ny seranam-piaramanidina dia ny olana amin'ny rafitra fifandraisana amin'ny radio, ”hoy ny mpitondra tenin'i Aeroflot.
Raha ny filazan'ny mpitondra tenin'ny kaompaniam-pitaterana dia nandefa hafatra momba ny tsy fahombiazan'ny ampahany amin'ny rafi-pifandraisana ny mpanamory fiaramanidina ary nanapa-kevitra ny hiverina hiverina amin'ny seranam-piaramanidina fiaingana. Nanampy izy fa tsy tandindomin-doza ny ainy sy ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny ekipa ary mandoro lasantsy ilay fiaramanidina.